QORMOOYINKA – Page 10 – War La Helaa Talo La Helaa
Home » QORMOOYINKA (page 10)
Nuurka Nuurka 10/08/2017	1,297 Views
Waa Maqaalkii ugu Horeeyay ee taxana noqon doono laguna, iftiimiyay dulmiga iyo xishood la’aanta lagu haayo dadka Soomaaliyeed ee rabba in Alle ugu dhowaadaan soo gudashada mid ka mid ah tiirarka Islaamka oo ah waajib qofkii awooda laga rabo inuu soo guto waajibka alle saaray ee ah Xajka. Dad bada oo mas’uuliyiin mansab sare iyo xilal kala duwan ka haaya ...
Jiinoow 10/08/2017	1,459 Views
Sheekh Mukhtaar Abuu-Mansuur oo dadka u yaqaanaan Roobow ayey Mareykanka ka saareen liis ay dul dhigeen lacago malaayiin ah, liiska waxaa ka mid ahaa 6 kale oo ka tirsan madaxda Al-shabaab, waxaa xusid mudan in Roobow aan marnaba ka mid noqon liiska argigixisada uu Mareykanka soo saaray. Hadaba, Waa Kuma Sheekh Mukhtaar Roobow: Sheekh Mukhtaar Abuu-Mansuur illaa hadda waxaa uu ...
Jiinoow 10/08/2017	1,141 Views
Maxamed Xasan Fiqi oo ah ku simaha hoggaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay in uu nool yahay Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur islamarkaana uu weli ku taagan yahay waddadiisa. aroornimadii Arbacadii ayeey ahayd markii ay Alshabaab weerar adag ku qaadeen saldhig iyo deegaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaas oo uu ku sugannaa Abuu Mansur. Maanta waxaa soo baxayay warar ...
Nuurka Nuurka 09/08/2017	2,263 Views
Mudaneyaal ka kala tirsan Baarlamanka Fedaraalka Somalia Iyo Maamulka Galmudug Kuna heyb ah ra’isal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Magaalada Muqdisho ka bilaabay Olole logu mucaaradayo Xukumadiisa. Xildhibanadaasi oo ka soo jeeda Beesha Cabdalle Sabdi oo ka Mid ah Beelaha Murusade’ ayaa waxgarad iyo Odayaal ku abaabulaya Hoteelo ku yaalo Magaalada Muqdisho si aay Warbaahinta ula hadlaan ‘ayaga oo si ...
Jiinoow 09/08/2017	302 Views
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta daah furay barnaamij loogu magacdaray hab xisaabeedka Cusub ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Hoose ee Xamar. Waxaa ka soo qayb galay Safiiro, xubno ka socday Golaha Wasiirada, Xeer ilaaliyaha Qaranka, Hanti dhowraha guud, ku xigeenka madaxa Bankiga dhaxe iyo shaqaalaha gobolka Banaadir, waxaana si wayn looga dooday faa’iidooyinka laga dhaxli karo in bulshada loo ...
Ma Dhabbaa In Madaxwaynaha Puntland Uu Saammi Ku Leeyahay Shirkad Sameysa Lacagaha Faalsada Ah (Sir Iyo Kashifaad)
Jiinoow 09/08/2017	476 Views
Dhawaan dalka qaybo kamid ah waxa laga cabanayay lacago Faalso ah oo gudaha lagu sameeyo islamarkaana dhibaato badan ku heysa dalka. Burhaan Aadan Aw Cabdi oo kamid ah golaha baarlamaanka Puntland ayaa kashifay sir aad u wayn oo ah in Madaxwaynaha maamulkaas Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo kuxigeenkiisa ay iyagu saami ama share ku leeyihiin makiinnad sameysa lacagaha ...
AKHRISO:- Magacyada Saraakiisha Alshabaab Ee Hoggaaminaya Weerarka Lagu Qaaday Abuu Mansuur (Xog Muhiim Ah)
Jiinoow 09/08/2017	1,068 Views
Alshabaab ayaa saakadii hore weerar aan meel loo dayin ku qaaday fadhiisimihii maleeyshiyada hoos tagta Amiir kuxigeenkii hore ee ururkaas SheekhMukhtaar Roboow Abu Mansuur, kaas oo ururkaas kal hore ka baxay. Weerarka saakay lagu qaaday Sheekh Mukhtaar waxaa kasoo kordhaya warar kala duwan, oo ay kamid yihiin in la ogaaday hoggaamiyayaashii weerarkaas ciidankii fulinayay watay. Xasan Yacquub Cali oo horay ...
Jiinoow 09/08/2017	276 Views
Kooxaha Ugu lacagta badan adduunka ee Manchester United Iyo Real Madrid ayaa xalay isku qabtay kulanka caanka ah ee Super Cup-ka Yurub, maadaama mid kasta oo kamid ah labada kooxood uu kusoo guuleeystay tartanka Champions League iyo kan Europe League. Ronaldo ayaa kahor yimid kooxdiisii hore, inkastoo uu soo galay 10-kii daqiiqo ee ugu dambeysay haddana wax saameyn ah kuma ...
Jiinoow 09/08/2017	532 Views
Labo ka tirsan booliiska dalka Hindiya ayaa shaqada laga eryey kadib markii ay ka been sheegeen in ay fuuleen buurta adduunka ugu dheer ee Everest, iyada oo uu beentaasi ku qirey guddi baaritaan oo loo saaray sheegashadooda. Dinesh iyo Tarakeshwari Rathod ayaa sanadkii sanadkii hore sheegey in ay ku guuleysteen in ay noqdeen lammaanihii ugu horeeyey oo booliis ah oo ...
Jiinoow 09/08/2017	275 Views
SIda hadda socota cod tirinta doorashada dalka Kenya, madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa ku sareeya, taas oo natiijo ahaan si hor dhac ah loo sii saadaalinayo in uu ku guuleeysan doono haddii ay sidaan kusii socoto. Durba hoggaamiyaha Mucaarradka Raila Odinga ayaa qaaddacay natiijada hor dhaca ah ee doorashada dalka Kenya, isagoona sheegay in aysan ahayn wax caddaalad uuna tuhmayo gacan ...